Afrika Mainty · Oktobra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Oktobra, 2016
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Oktobra, 2016
Etiopia17 Oktobra 2016
Hehy15 Oktobra 2016
Etiopia13 Oktobra 2016
Amerika Avaratra11 Oktobra 2016
Angola09 Oktobra 2016
Navoaka tao Londra tamin'ny 3 Aogositra ny "Tondro Mo Ibrahim", izay nampiseho vokatra tena nifanipaka amin'ireo ireo firenena miteny Paortiogey amin'ny fomba Ofisialy (PALOP) amin'ny resaka "fahaiza-mitantana". I Cap-Vert no mbola mitana ny laharana voalohany raha midina hatrany kosa ny laharan'i Angola.
Etiopia06 Oktobra 2016
Cap Vert05 Oktobra 2016
Tanzania03 Oktobra 2016
Niseho teo anatrehan'ny fitsarana Tanzaniana tamin'ny 14 Septambra lasa teo ny olom-pirenena Tanzaniana miisa dimy, voampanga ho nanivaiva ny Filoha John Magufuli tao amin'ny media sosialy. Nandà ny fiampangana azy ireo olona dimy ireo.
Mozambika03 Oktobra 2016
Ny Parlemantan'ny Tanora, fikambanana mametraka ny tahoran'i Mozambika ho laharam-pahamehana, no tompon-kevitra te-hanome anarana Samora Machel, filoha voalohany ao amin'ny firenena, ny Seranam-Piaramanidina Iraisampirenen'i Maputo. Mitady sonia roa arivo ny fanangonan-tsonia ho amin'izany.